Mason ingqayi mveliso - China Mason ingqayi abavelisi, ababoneleli
Ibhotile yeoyile yeminquma
Itanki lokuGcina iSilicon ephezulu
Vase ethe nkqo
Itafile encinci yevazi
Umlomo omncinci wokutya okuziinkozo intyatyambo
200 ml iibhotile zearomatherapy
Iglasi yekristale yedayimane ekhanyayo isibane
Ibhotile yesoda engenasiphelo eyi-1000ml
Ibhotile yeoyile yomnquma eyi-500 ~ 1000ml emnyama eluhlaza
750ml ingqayi yemasoni yokutya
Ukulungiselela Ukutya kunye nokuGcina:
Ingqayi efanelekileyo yokuLungiselela iisaladi zakho zomsebenzi okanye naluphi na uhlobo lokuphuma, kwaye kulungile ukugcina ukutya kwakho ngesixa esifanayo sokutya okulungiselelwe yonke imihla yeveki
Ngaba unokugcina iijam zakho ozithandayo kunye nejeli kunye nokunye okuninzi.
Indawo entle yokugcina i-oats, umgubo, iswekile, ukutya kwenja, okanye amashwamshwam! Ungagcina i-pizza isosi, i-salsa, i-gazpacho, umhluzi, kunye nesiraphu yemephu kwimiphanda nayo!
500 ml indebe yemasoni enomququ
Iingqayi zeglasi ezomileyo ezihlala ixesha elide kunye neziciko zensimbi ezingenasici kunye neendiza
Iikomityi ezigqibeleleyo zokuhambisa iziselo ezixutyiweyo, i-smoothies kunye nezinye iziselo ezibandayo
Ilungele umtshato, ibhari, indlu, iqela, okanye nayiphi na indibano yoluntu
Umbono wesipho esihle kubahlobo kunye nefamil
500ml iglasi ingqayi ukutya
Ukugcina ukusuka kuNcinci ukuya kuKhulu
Kwesinye isiphelo sesibuko sethu, ungonwabela ingqayi yethu yomlomo yesiqhelo, iklasikhi yaseMelika ekhawuleze ukutya ekhaya. Kodwa zininzi izinto zangoku ezisetyenziswayo kule ngqayi yesayizi ethandwayo kubandakanya imixube yecookie ecekeceke, ubugcisa besanti kunye nokukhuhla okwenziwe ekhaya. Ngokuchasene nembiza encinci, kuhlala umlomo omkhulu, obanzi weBhola Mason Jar efanelekileyo yokugcina iijusi okanye iiapile, kunye nezinye izinto ezinje ngokugcina iofisi okanye ubugcisa kunye nezinto zobugcisa
Iingqayi ezimbini ezinemilomo emibini eyahlukeneyo
Iingqayi zomlomo eziqhelekileyo zithinjiwe kwaye zinika ukuvulwa okuncinci ngaphezulu, ngelixa iingqayi zomlomo ezibanzi zinika ukuvulwa okukhulu phezulu. Kukho izibonelelo ezizodwa kuhlobo ngalunye lokuvula, kwaye unokuthatha isigqibo sokuba uza kulusebenzisa nini kwaye njani uhlobo ngalunye ngendlela eya kukunceda kwaye ikulungiselele iimfuno zakho.
UKUTYA KWEBAKALA: Ibhotile nganye yemasoni yenziwe ngezinto zokutya, ezilungele ukugcinwa kokutya. Umzimba weglasi ozinzileyo, ezineziciko zesilivere zizinto eziQinisekisiweyo zokubola kunye nokugqitha imigangatho yokhuseleko ye-FDA.
ITYWINA TIGHT: Qinisekisa itywina esemgangathweni isiciko ngasinye. Intle kwaye iyasebenza, vumela ikhitshi lakho ligcwele ubuchule boncwadi kunye nobugcisa, ingqiqo ye-retro, gcina intsha ixesha elide!
IVERSATILE & MULTIPURPOSE: Ilungele ijam, ijeli, ukutya komntwana, ukuthanda umtshato, iziqholo, ubusi okanye izipho zabo ezenziwe ekhaya. Zintle kakhulu ngezinongo, imifuno, ipayi njalo njalo, zilungele ikhitshi, igumbi lokuhlala, ibhafu kunye nawuphina umcimbi!
UKHUSELEKO KWI-DISHWARE: I-Dishware safe ibenza ukuba kube lula ukuyicoca, okanye ungazihlamba ngamanzi nangeesepha, ngaphandle kobunzima!
500ml ingqayi yemasoni yokutya
Le mveliso yenziwe ngezinto zeglasi ezinokusingqongileyo, ezintle, ezizinzileyo, ezinxibayo kunye nobomi benkonzo ende.
Umlomo webhotile ucocekile kwaye ungqukuva, kwaye umlomo webhotile ulungisiwe. Kukhuselekile, kugudile kwaye kujikeleze, kwaye emazantsi ebhotile omelele kwaye atyebile.
Umbala we-vase ngumbala wokuqala weglasi, ophethwe ngesandla kwaye ungenayo idayi yonyango emva kokunyanga!
450ml wokutya okwibanga lokutya unokusebenzisa isitroyi
I-480 ml yeglasi yekomityi yomququ enomququ
500ml iglasi mason indebe kunye umququ
500ml mason ingqayi kunye nengca
I-600 ml yeglasi yekomityi yekomityi
Ibakala lokutya lokusingqongileyo i-450ml jar
200ml ukutya mason ingqayi
Kulula ukuvula isiciko: Iziqulatho zikhawuleze kwaye kulula ukuzisebenzisa
I-Sheer, Jonga ngeLid: Kulula ukuchonga imixholo ngaphandle kokuvula nganye
Umzimba oChaphazelayo: Inoveli engumzimba owenzakalisayo owenza ibhokisi enganyangekiyo
Stackable: Ungagcina izikhongozeli enye ngaphezulu kwenye, iiNdawo zokugcina iisitayile, Kukunceda uququzelele ikhitshi lakho
Lo moya uqinileyo ukhululekile kwi-BPA (iBisphenol A), ebangela iingozi zempilo xa isiza ekudibaneni nokutya kunye nolwelo, ukuqinisekisa indlela yokuphila esempilweni usebenzisa iBisphenol A Imveliso yasimahla.
Iimveliso zeglasi zeXuzhou Honghui Co., Ltd. yamkela abathengi behlabathi lonke, sijonge phambili ekubeni liqabane lakho elithembekileyo!
Junsheng Plaza 3-1202, Isithili Gulou, Xuzhou, Jiangsu, China
Ibhotile yeglasi enokuphinda isebenze
Ingaba uyazi? Zininzi iintlobo zeglasi ...
Ngaba uyazi ukwenza iibhotile zeglasi glass